पटक पटक किन दूतावास छिर्छन् मधेशी नेताहरु ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » पटक पटक किन दूतावास छिर्छन् मधेशी नेताहरु ?
पटक पटक किन दूतावास छिर्छन् मधेशी नेताहरु ?
काठमाडौ मंसिर १८ गते । जब जब देशमा राजनीतिक उल्झन बढ्छ तब तब मधेशी दल बदनामीको शिकार बन्छ ।
त्यो पनि अरु केही होइन, भारतका कारण मात्र । मधेशवादी दल भारत प्रस्त हुन् भने प्रमाण पटक पटक उहाँहरुले आफै दिइरहनु भएको छ ।
दूतावासले हुकुमको शैलीमा मधेश मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाउँछन् र मधेशी मोर्चाका नेताहरु पनि हुल बाँधेर दुतावास पुग्नु हुन्छ । चाहे त्यहाँ काम होस् वा नहोस् बदनामीको पोको लिएर फर्कन्छन् । आजसम्म दुतावासका कुनै पदाधिकारीले मधेशवादी दलका नेताहरुसँग दूतावास बाहिर भेटेर छलफल गरेको सायद त्यस्तो उदाहरण छैन ।
तर प्रचण्ड, सुशिल कोइराला, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सूर्यबहादुर थापालगायतका नेताहरुको घरमै गएर भेटेको थुप्रंै उदाहरण छन् ।
तर मधेशवादी दलमा पनि उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, पार्टीका अध्यक्षदेखि विभिन्न पदमा बसि सक्नु भएका नेतालाई दूतावासको एउटा कर्मचारीले बोलाउँदैमा कुदेर जान्छन् ।
दूतावासका राजदूतले पनि नेताको घर तथा पार्टी कार्यालयमा भेट्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो हुँदैन । दुतावासबाट हुकुम नै आउँछन् । भारतीय दुतावास बोहेकका राजदूतहरु मधेशी नेताहरुलाई उहाँहरुको घर तथा पार्टी कार्यालयमा भेटेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।
मधेशवादी दलका नेताहरुलाई थाह छ कि दूतावास छिर्ने वित्तिकै बदनामी हुन्छ, तैपनि जानी जानी ती बदनामीको पोको लिन किन जान्छन् ?
जब कि मधेशी दलभन्दा बढी पहाडी दलले फेइदा लिइरहेका छन् । नेपालमा भारतीय दूतावासको खर्च हेर्ने हो भने मधेशभन्दा पहाडमा बढी छ । नेताहरुले सुविधा पाउने कुरा आउँछन् भने मधेशी भन्दा पहाडी नेताले बढी सुविधा पाएका छन् ।
छात्रवृतिकै लिस्ट हेर्ने हो भने मधेशी भन्दा पहाडीको बढी छ । भारत घुम्नेको लिस्ट हेरियो भने मधेशीभन्दा पहाडी नै बढी हुन्छ । अर्थात फाइदा लिने पहाडी र बदनामा हुने मधेशी ? यस्तो टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि मधेशीलाई भारतले युज मात्र गरिरहेका छन् ।
दुतावास छिर्ने वित्तिकै मधेशी मोर्चाको चर्चा शुरु हुन्छ । यसमा उहाँहरुको तर्क छ, दुतावास अरु दलहरु पनि जान्छन् तर उनीहरुको त्यति चर्चा हुँदैन हाम्रै मात्र किन चर्चा हुन्छ, प्रायः मधेशी नेताहरुको तर्क यही हुन्छन् ।
मधेशी नेताहरुले यो किन बुझनु हुन्न कि ती नेताहरुको घरमा दुतावास जान्छ, दुतावासमा उहाँहरु जानु हुन्न । गए भने एकदमै गोप्य तरिकाले जानुहुन्छ जो जो कानो कान थाह हुँदैन ।
मधेशी मोर्चाक्रा नेताहरु जाँदा पुरै तयारीका साथ जान्छन्, चार पाँचवटा गाडी लिएर नै भित्र छिर्नुहुन्छ । यद्यपी यो कुराबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलग राख्नु भएको छ ।
मधेशी मोर्चासँग दूतावासभित्र हुने अधिकाँश बैठकमा अध्यक्ष यादव जानु भएको छ । आज पनि दूृतावासमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुको बोलाहट थियो त्यसमा उपेन्द्र यादव जानु भएन । जब कि उहाँ काठमाडौमै हुनुहुन्थ्यो । आजको बैठकमा शरतसिह भण्डारी जानु भएन कारण उहाँ भारत आफ्नो व्यक्तिगत कामका लागि जानु भएको छ ।
आज दूतावासमा रन्जित रायसँग भएको भेटघाटमा तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झ, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोको सहभागि थियो ।
र, उहाँहरु जहिले पनि भेट गरेर बाहिर निस्किँदा पत्रकारहरुलाई झुठो विवरण सुनाउनु हुन्छ । त्यहाँ भित्र हुँदै नभएका कुरा भनेर पत्रकारहरुलाई दिग्भ्रमित गरि रहनु भएको हुन्छ ।
आज पनि त्यस्तै भयो । मधेशवादी दलका नेताहरुले विनामौसमका बाजा बजाउनु भएको छ । दुतावासबाट निस्केपछि पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उहाँहरुले मधेशमा हुने विकास कार्यको बारेमा छलफल गर्नका गएको प्रतिकृया दिनु भयो ।
जुन सत्य होइन, हुनसक्छ कुराकानीको सन्दर्भमा हुलाकी सडक लगायतका विभिन्न विषयमा कुरा उठेको होला तर प्रमुख विषय त्यो मात्र थिएन । स्रोत भन्छन्, प्रमुख विषय अहिलेको समसामयिक विषय सविधान संशोधन नै थियो ।
मधेशी नेताहरु जाने वित्तिकै सविधान संशोधनको विषयमा उहाँहरुको धारणा जाने प्रयास गर्नुभयो रन्जित रायले ।
केही माग पूरा भएको छैन भने होइन, केही नकेही त पक्कै भएको छ, समर्थन जनाउँदा नै राम्रो पनि मधेशवादी दललाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
त्यो आग्रहमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले संशोधनमाथि आफूहरुको पूर्ण समर्थन छैन, संशोकधन परिमार्जन भएर आए त्यसमाथि धारणा बनाउन सकिने धारणा राख्नु भएको थियो ।